Ukuhanjiswa kwekhaya kunye nokubeletha endleleni
Kukho amaxesha xa ukuhanjiswa kwenzeka ngaphandle kweemeko zesibhedlele sokubeleka, kodwa ekhaya okanye kwindlela. Namhlanje, siya kuthetha malunga nendlela yokudlulela ekhaya nokubeleka endleleni.
Kungekudala, ngokuphindaphindiweyo abafazi bathanda ukuzala kungena kumaziko empilo, kodwa ekhaya. Uninzi lwabasetyhini bakhetha le ndlela yokunikezela, njengoko izindonga zendwendwe zendlu zamnceda ukuba akwazi ukunyamezela intlungu ngexesha lokutshatyalaliswa, loo nto ibhinqa eliqhelekileyo, oku kuthetha ukuba uzolile yaye unokulwa nokutya. Kwakhona, ubukho bomyeni okanye omnye umntu ozalwayo buqinisa amandla omzimba kunye nokuziphatha komfazi osebenzayo. Ukuziqhelanisa kubonisa ukuba ukuzala nomyeni wakhe kunzima kakhulu kwiintlobo ezininzi, kuba ibhinqa elisemzimbeni livakalelwa njalo kunye nenkxaso. Xa umntu ekhona ngexesha lokubeletha, uba ngumbono wendlela umntwana wakhe azalwa ngayo, ubona imizuzwana yokuqala yobomi bakhe, uva ukukhala kwakhe kokuqala. Le ndoda ifumana ngexesha elifanayo ukutshatyalaliswa kwamandla, okwenza kamva kuthinteke iimvakalelo zakhe neemfanelo zakhe.
Elizweni lethu, kunjalo, ukuzalwa ekhaya akufani nje nakwezinye iindawo zaseYurophu naseNtshona. Ngokuqhelekileyo, ukuzalwa kwekhaya kwenzeka xa ibhinqa lingenalo ixesha lokuhambisa kwiwadi yesibhedlele ngexesha. Umfazi ubeletha ekhaya, kodwa emva koko yena kunye nosana baya kuthunyelwa kwi-ward yomama wokubeletha, kungekhona ngokuqhelekileyo, kodwa kwisebe eliqwalaselayo.
Kufuneka ubelethe ekhaya kuphela xa unomntwana waza wazalelwa ngaphandle kokungxaki, uphilile kwaye umntwana uqhelekileyo, ukukhulelwa kwakungabonakali, kukho ithuba lokumema umgqirha wokuzalwa.
Kufuneka ukhunjulwe ukuba ukuba uceba ukuzala ekhaya kwangaphambili, kufuneka ukwazi ukuthutha esibhedlele ukuba kukho iingxaki ezingalindelekanga ngexesha lokubeletha.
Ukuba ubukhulu bezityalo zikhulu, ukuba unama-polyhydramnios okanye unamawele, ke akukho mbuzo wokuzalwa ekhaya. Kufuneka ubelethe esibhedlele sokubeleka, apho unokubonelelwa ngoncedo olufanelekileyo lwezonyango ngexesha.
Okwangoku, kukho amaxesha apho ukuzalwa kuqala ngokukhawuleza kwaye kukhula ngokukhawuleza. Iimeko ezinjalo zivela xa unina sele sele esele wazalwa ngokuphindaphindiweyo, ukuba umsebenzi usuqale ngaphambi kokuba, ukuba isiqhamo sincinane. Ewe, ukuzalwa okunjalo kungalindelekanga ukuzalwa kwamakhaya, okulungiselelwe kwangaphambili. Emva kokuzalwa okunjalo, kuyimfuneko, ngokukhawuleza kunokwenzeka, ukuhambisa unina nomntwana kwidilesi yokubeletha esondeleyo ukuze bahlolwe, ukuze umntwana anikwe i-serum anti-tetanus, njl njl.
Kwiinyanga zokugqibela zokukhulelwa, akufanele wenze nayiphi na ihambo, ngokukodwa ekude. Kodwa ngamanye amaxesha imeko ikhula ngendlela enyanzelekile ukuba uye kwindawo ethile ngaphambi kokuzalwa. Emva koko kukho ukuphakama okuphezulu ukuba abasebenzi baqalise endleleni.
Ukuba ukuzalwa kokuqala kuthutho loluntu, umzekelo, kwindiza okanye kwisitimela, ngoko kwangoko uzazise umqhubi okanye umgcini wendiza malunga nalo. Banokufumana oogqirha phakathi kwabagibeli. Uncedo lunokunikwa ngabantu abahamba nawe: indoda, unina, umzalwana okanye nokuba ngumfazi ovela kubagibeli abazalayo. Into ephambili xa ubeletha kwindlela ukugcina ubuninzi bokucoceka, cela abaqhubi bebhanti ezingenabumba, iodine, utywala, zelenok. Inkqubo iya kufuna iimpahla ezicocekileyo okanye iimpahla ezicocekileyo. Abo baza kuncedisa unina ekubambeni kufuneka bahlambe izandla zabo ngeesepha, bayihluthe ngobunxila (kwiimeko ezimbi kakhulu - nge-cologne), gcoba iminwe kunye neminwe nge-iodine.
Ukuba ekuzalweni awuncedwa ngugqirha, ngoko kungcono ukuba ungachukumisi isisu nesisu, ngoko kuya kuphazamisa inkqubo yendalo. Uncedo lwakhe lufanele ukuba, emva kokuzalwa kwentloko kunye namagxa, ubeke phezu kweengubo zangasese ezicocekileyo phakathi kwemilenze yomama, ususe umxube ovela ekhaleni kunye nomlomo kunye ne-bandage. Oku kwenziwa ngokucophelela, kuba isana esinezinthambo ezinomsoco. Kufuneka kuqinisekiswe ukuba intambo yomlomo ayilwanga. Ingcaciso ngomzuzu emva kokuba umntwana azalwe, kufuneka ubophe intambo yakhe emibini kwiindawo ezimbini - kumgama we-10 no-15cm ukusuka kwintonga yakhe. Iphulo lomntwana kufuneka libe lomelele ngakumbi. Intambo yesibindi kufuneka iphathwe nge-iodine phakathi kweenombolo. I-scissors apho intambo yomgca iya kunqunyulwa yatshiswa ngelangatye yeebhanti kwaye iphathwe nge-iodine. Intambo yomnxeba iyanqunyulwa phakathi kweendawo. Ibhanti engumzimba isetyenziswe kwintambo yomlomo. Usana olusandul 'usana lufakwe kwi-diaper (iphepha) kunye neengubo ezifudumeleyo.
Emva kokuzalwa komntwana, umfazi onzima kufuneka abelethe umntwana. Musa ukukrazula ngentambo. Umva wokugqibela uza kuzalelwa xa ukuhlukana kwakhe kwendalo kwenzeka. Emva kokugqibela kokuphuma kwinqwelo yokuzalwa, kufuneka uyigubungele kwilinen ecocekileyo, njengoko kufuneka ihlolwe ngugqirha. Ukuze i-uterus ihlaziye kakuhle, unokubeka ubanda kumama kamama okanye umvumele ukuba alele ixesha elithile kwisisu sakhe.
Emva kwemizuzu eyi-15 umntwana osandul 'ukuzalwa kufuneka aphenduke, aphefumule, kwaye ukukhala okukhulu. Kungakhathaliseki ukuba kwenzeka njani ukuzalwa, umama nomntwana kufuneka bathuthukiswe ngokukhawuleza kwisibhedlele esiseduze okanye esibhedlele.
Ukunciphisa isisu emva kokubeletha
Ukukhuthazwa kwezabasebenzi, ukuchithwa kweplenti
Ukuzala umntwana onempilo ngaphandle kwentlungu kunye noyiko
Ngaba ndinokukhetha ukuba ndizalele njani?
UAnastasia Vertinskaya: ubomi bomntu
Ukungenanto kunye nokukhululeka
NgoMatshi ngeTrump: Madonna ulungele ukuvuthela i-White House
Indlela yokuphakamisa kakuhle intombi?
I-pumpkin kunye ne-shrimps pasta
I-spaghetti eneenyama egxothwe
I-Soups yaseThailand Tom KXA
Amakhukhamba e-Crispy kunye ne-ketchup ebusika ngaphandle kwenzalo kunye nayo. Iidraphi zokupheka ngesithombe samakhukhamba kwi ketchup yaseChile kunye nama-lobules
Imithetho yokuphila ephephile kubantwana
Unyango lwe-hepatitis kunye nezindlela zabantu
Imodi yeendwendwe (iveki yeentsapho)
Ukuvuselelwa kwezingane zasesikolweni
Ungayilungisa njani isiselo esiselwandle?
Ubudlelwane phakathi kwendoda nomfazi baxabana nomyeni wakhe
Indlela yokukholisa umyeni wakhe ukuba ayeke ukusela?